Nirotsaka ny orana: dibo-drano maloto ny tanàna | NewsMada
Nirotsaka ny orana: dibo-drano maloto ny tanàna
Hiato ny orana ho an’ny faritra Analamanga ao anatin’ny telo andro ho avy, araka ny fanazavan’ny teknisianina eny amin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Ho an’ny faritra Analamanga ahitana an’Antananarivo izay tombana izay, indrindra ho an’ny ilay atsinanana. Mety hahitana oram-baratra kosa ny ilany andrefan’Antananarivo.
Vao nirotsaka 30 minitra ny orana ny alarobia hariva, betsaka ny lalana dibo-drano tanteraka ary sahirana ny fiarakely sy iva namakivaky ny ranobe nanondraka ny arabe rehetra. Nimenomenona avokoa ny olona mipetraka eny amin’ny faritra iva toy ny teny Ambodin’Isotry, ny eny 67 ha, ny eny Analakely fa voatery mirobo-drano rehefa handeha hody any an-trano. Omaly, efa nitsika ny rano ho an’ny faritra sasany, saingy mbola nandrevo ny fotaka teny amin’ny ankamaroan’ny lalana.
Sahirana hatrany ny mponina eto Antananarivo raha vao mikija ao anatin’ny ora maromaro ny orana. Tsy nisy vokany ny asa fanadiovana ny lakandrano sy ny tatatra samihafa fivarinan’ny rano tao anatin’ny fotoan’ny maintany. Teny Ambodin’Isotry, nijoboka ao anaty rano avokoa ny mpandeha an-tongotra hamonjy asa na hivarotra na ireo mpanatitra mpianatra. Ireo ao anaty fiara ihany no tsy mirobo-drano. Tsy ranon’orana madio ilay rano fa mivoaka ivelan’ny lakandrano avokoa ny rano maloto isan-tokantrano, ahina ny valanaretina vokatr’izany. « Loza raha mbola hitohy ny orana ao anatin’ny andro maromaro fa hiditra any an-tano mihitsy ny rano maloto », hoy ny mponina. Misy fisokirana ny lakandrano ataon’ny tomponandraikitra eo akaiky eo fa efa be loatra ny fako manentsina ka miadana ny asa, avy rahateo ny orana.
Hatramin’izao, tsy misy vahaolana maharitra isorohana ny fiakaran’ny rano eto Antananarivo fa miverina isan-taona hatrany ny olana.
Finday 1, hazo 1: Zanakazo 50.000 nambolena any Mahajanga 24/01/2022
Vokatry ny fahatapah’ny ny RN2: tsy ampy ny solika, hihamafy ny delestazy 24/01/2022
FMI: fampindramam-bola tsy misy zanabola 24/01/2022
Fahatapahan’ny lalam-pirenena faharoa: maika ny fanamboarana hialana amin’ny fanararaotana 24/01/2022
Fandikan-dalàna momba ilay volamena 49kg: hadihadian’ny ladoany ireo sarona tatsy Kaomoro 24/01/2022